အီးမေးလ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါ သတိထားရန်အချက်များ - Myanmar Network
အီးမေးလ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါ သတိထားရန်အချက်များ
Posted by Language Republic on August 17, 2015 at 11:36 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အကယ်လို့ သင်ဟာ လူနှစ်ဦးကို ကြားဝင်ပြီး အီးမေးလ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါ double opt-in intro ဆိုတဲ့ ကြိုတင် မိတ်ဆက်ထားတာမျိုး မလုပ်ဖူး/ မသုံးဖူးဆိုရင် သင်ဟာအတော့်ကို ဆိုးရွားတဲ့ လူတစ်ဦးလို့ အထင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းဆက်မပြောခင် single opt-in intro ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
Single opt-in intro ဆိုတာ မိမိက သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဆက်ပေးမဲ့သူကို ဘယ်သူ ဘယ်ဝါနဲ့တော့ မ်ိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ် ဆိုပြီး ကြိုတင် အကြောင်းကြားကာ သူ့ရဲ့ သဘောထား ခွင့်ပြုချက် ရယူပြီးတော့မှ နောက်တစ်ဖက်ကသူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးရှင်းလင်းအောင် ဥပမာလေးနဲ့ ရှင်းပြပါမယ်။
Joe က သူ့သူငယ်ချင်း Jack ကို Mary နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။ သူက Mary ကို ခပ်တည်တည်ဘဲ အီးမေးလ်တစ်စောင် လွှတ်လိုက်တယ်။ Jack ကိုလည်း cc (copy) လုပ်ထားလိုက်သေးတယ်။
Joe ရဲ့ အီးမေးလ်ကို ကြည့်ရင် တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့ မိတ်ဆက်ပုံကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်………..
အချိန်အတွက် အလေးမထားခြင်း။ ။ ဒီစာရေးဘို့ Joe အတွက် စက္ကန့် ၃၀ လောက်သာ ကြာမြင့်ပေမဲ့ Mary ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကို ထည့်မစည်းစားထားပါဘူး။ Joe က တွေ့သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ Mary က Jack ကိုကောက်ခါ ငင်ကာ ကော်ဖီဆိုင်ကိုဘဲ ချိန်းရတော့မလိုလို၊ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘဲ မိတ်ဆက်စကားပြောရမလိုလိုဘဲနော်။
ဘာအကြောင်းအရာမှလဲမပါခြင်း။ ။ ဒီအီးမေးလ်ကို သေသေခြာခြာကြည့်တော့ ဘာအကြောင်းအရာကိုမှလည်း ရှင်းမပြထားပါဘူး။ ရေးထားတာတွေအားလုံး ဝေဝေဝါးဝါး၊ ပြောင်ပြောင်ရှင်းရှင်းကြီးနဲ့ ပျင်းရိစရာကောင်းပါတယ်။ အီးမေးလ်ကိုဖတ်ပြီး Mary ကဘဲ Jack ကို ဆက်သွယ်ပြီး သူဘာတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ် လုပ်ကိုင်နေလဲဆိုတာ စုံစမ်းရတော့မလို။
Mary ကိုရော Jack ကိုပါ မျက်နှာပူစရာဖြစ်စေခြင်း။ ။ အကယ်လို့ Mary က ဒီအီးမေးလ်ကို ဘာမှ အရေးတယူမလုပ်တော့ဘဲ Jack ကိုလည်းမဆက်သွယ်ဖူးဆိုရင် Mary က ရိုင်းစိုင်းရာကျတော့မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ Jack ကလည်းသူ့ကို Mary က ဆက်သွယ်မှာလား။ သူကဘဲ ဆက်သွယ်လိုက်ရမလား ဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီး ငကြောင်ကြီး ဖြစ်ရတော့မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအီးမေးလ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အထမမြောက်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလို အီးမေးလ်မျိုးနဲ့ သင့်ခင်မင်ရသူတွေ မျက်နှာပျက်အောင် မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။
ကဲ……..ဒီတော့ကာ double opt-in introduction ကိုဘယ်လိုသုံးရသလဲ? Double opt-in intro ဆိုတာအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းကာ မိမိ မိတ်ဆက်ပေးမယ့် သူတွေကိုလည်း တလေးတစား ရှိစေပါတယ်။ သင်လည်း လူဆိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ အောက်မှာဖေါ်ပြမယ့် အီးမေးလ်ကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဒီတစ်ခေါက် အီးမေးလ်မှာတော့ Jack ကို cc (copy) မလုပ်တော့ပါဘူး။
Joe က Jack ဘာကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်စေမှာလဲဆိုတာ သေသေခြာခြာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့လဲ ပြီးပြီးရောဆိုပြီးကျန်တာ Mary က ဆက်လှုပ်ရှားပစေတော့ ဆိုပြီး တာဝန်မဲ့ လွှဲပေးလိုက်တာမျိုးမရှိဘူး။ ဆန့်ကျင်ဖက်အနေနဲ့ Joe က Mary နဲ့ Jack နှစ်ဦး နှစ်ဖက်စလုံး အကျိုးရှိစေမဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သေခြာစွာ အချိ်န်ပေးလေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ သူတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ စိတ်ကူးတာတွေ့ရပါတယ်။
Joe က Mary ကို opt-in ခေါ် ရွေးစရာ လမ်းပေါက်လည်း ဖွင့်ပေးထားတယ်။ Mary ကို လက်မခံ ခံအောင် တိုက်တွန်း ဖိအားပေးတာမျိုး မလုပ်ထားဘဲ အကယ်လို့ စိတ်မဝင်စားဖူး၊ မအားသေးဖူး ဆိုရင်လဲ ဒီအတိုင်းထားလို့ရတယ်။ စိတ်မပူဖို့ လမ်းဖွင့်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် လူ ၂ ယောက်ကို ကြားကနေဝင်ပြီးမိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင် double opt-in ကိုသုံးတတ်အောင် ကျင့်ထားလိုက်ပါစို့နော်။
qz.com မှ Anand Sanwal ၏ "You’re probably doing email introductions wrong" ဆောင်းပါးအား ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
- Join us now at www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp
အကယျလို့ သငျဟာ လူနှဈဦးကို ကွားဝငျပွီး အီးမေးလျနဲ့ မိတျဆကျပေးတဲ့အခါ double opt-in intro ဆိုတဲ့ ကွိုတငျ မိတျဆကျထားတာမြိုး မလုပျဖူး/ မသုံးဖူးဆိုရငျ သငျဟာအတေျာ့ကို ဆိုးရှားတဲ့ လူတဈဦးလို့ အထငျခံရနိုငျပါတယျ။ ဒီအကွောငျးဆကျမပွောခငျ single opt-in intro ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ကွညျ့ရအောငျ။
Single opt-in intro ဆိုတာ မိမိက သကျဆိုငျရာ မိတျဆကျပေးမဲ့သူကို ဘယျသူ ဘယျဝါနဲ့တော့ မျိတျဆကျပေးပါ့မယျ ဆိုပွီး ကွိုတငျ အကွောငျးကွားကာ သူ့ရဲ့ သဘောထား ခှငျ့ပွုခကျြ ရယူပွီးတော့မှ နောကျတဈဖကျကသူနဲ့ မိတျဆကျပေးတာ ဖွဈပါတယျ။ ပိုပွီးရှငျးလငျးအောငျ ဥပမာလေးနဲ့ ရှငျးပွပါမယျ။
Joe က သူ့သူငယျခငျြး Jack ကို Mary နဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြတယျ။ သူက Mary ကို ခပျတညျတညျဘဲ အီးမေးလျတဈစောငျ လှတျလိုကျတယျ။ Jack ကိုလညျး cc (copy) လုပျထားလိုကျသေးတယျ။
Joe ရဲ့ အီးမေးလျကို ကွညျ့ရငျ တျောတျောဆိုးရှားတဲ့ မိတျဆကျပုံကိုတှရေ့လိမျ့မယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ကွညျ့လိုကျရအောငျ………..
အခြိနျအတှကျ အလေးမထားခွငျး။ ။ ဒီစာရေးဘို့ Joe အတှကျ စက်ကနျ့ ၃၀ လောကျသာ ကွာမွငျ့ပမေဲ့ Mary ရဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့အခြိနျကို ထညျ့မစညျးစားထားပါဘူး။ Joe က တှသေ့ငျ့တယျဆိုတာနဲ့ Mary က Jack ကိုကောကျခါ ငငျကာ ကျောဖီဆိုငျကိုဘဲ ခြိနျးရတော့မလိုလို၊ ဖုနျးဆကျပွီးတော့ဘဲ မိတျဆကျစကားပွောရမလိုလိုဘဲနျော။
ဘာအကွောငျးအရာမှလဲမပါခွငျး။ ။ ဒီအီးမေးလျကို သသေခွောခွာကွညျ့တော့ ဘာအကွောငျးအရာကိုမှလညျး ရှငျးမပွထားပါဘူး။ ရေးထားတာတှအေားလုံး ဝဝေဝေါးဝါး၊ ပွောငျပွောငျရှငျးရှငျးကွီးနဲ့ ပငျြးရိစရာကောငျးပါတယျ။ အီးမေးလျကိုဖတျပွီး Mary ကဘဲ Jack ကို ဆကျသှယျပွီး သူဘာတှစေိတျဝငျစားဖှယျ လုပျကိုငျနလေဲဆိုတာ စုံစမျးရတော့မလို။
Mary ကိုရော Jack ကိုပါ မကျြနှာပူစရာဖွဈစခွေငျး။ ။ အကယျလို့ Mary က ဒီအီးမေးလျကို ဘာမှ အရေးတယူမလုပျတော့ဘဲ Jack ကိုလညျးမဆကျသှယျဖူးဆိုရငျ Mary က ရိုငျးစိုငျးရာကတြော့မယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာဘဲ Jack ကလညျးသူ့ကို Mary က ဆကျသှယျမှာလား။ သူကဘဲ ဆကျသှယျလိုကျရမလား ဇဝဇေဝါဖွဈပွီး ငကွောငျကွီး ဖွဈရတော့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအီးမေးလျရဲ့ ရညျရှယျခကျြ အထမမွောကျပါဘူး။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ ဒီလို အီးမေးလျမြိုးနဲ့ သငျ့ခငျမငျရသူတှေ မကျြနှာပကျြအောငျ မလုပျလိုကျပါနဲ့။
ကဲ……..ဒီတော့ကာ double opt-in introduction ကိုဘယျလိုသုံးရသလဲ? Double opt-in intro ဆိုတာအလှနျကောငျးမှနျပွီး၊ စိတျဝငျစားစရာလညျး ကောငျးကာ မိမိ မိတျဆကျပေးမယျ့ သူတှကေိုလညျး တလေးတစား ရှိစပေါတယျ။ သငျလညျး လူဆိုးမဖွဈတော့ဘူး။ အောကျမှာဖျေါပွမယျ့ အီးမေးလျကို ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
ဒီတဈခေါကျ အီးမေးလျမှာတော့ Jack ကို cc (copy) မလုပျတော့ပါဘူး။
Joe က Jack ဘာကွောငျ့ စိတျဝငျစားဖှယျ ဖွဈစမှောလဲဆိုတာ သသေခွောခွာ ရှငျးပွထားပါတယျ။ ပွီးတော့လဲ ပွီးပွီးရောဆိုပွီးကနျြတာ Mary က ဆကျလှုပျရှားပစတေော့ ဆိုပွီး တာဝနျမဲ့ လှဲပေးလိုကျတာမြိုးမရှိဘူး။ ဆနျ့ကငျြဖကျအနနေဲ့ Joe က Mary နဲ့ Jack နှဈဦး နှဈဖကျစလုံး အကြိုးရှိစမေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို သခွောစှာ အချြိနျပေးလလေ့ာသုံးသပျပွီးမှ သူတို့ကို မိတျဆကျပေးဖို့ စိတျကူးတာတှရေ့ပါတယျ။
Joe က Mary ကို opt-in ချေါ ရှေးစရာ လမျးပေါကျလညျး ဖှငျ့ပေးထားတယျ။ Mary ကို လကျမခံ ခံအောငျ တိုကျတှနျး ဖိအားပေးတာမြိုး မလုပျထားဘဲ အကယျလို့ စိတျမဝငျစားဖူး၊ မအားသေးဖူး ဆိုရငျလဲ ဒီအတိုငျးထားလို့ရတယျ။ စိတျမပူဖို့ လမျးဖှငျ့ထားလိုကျပါသေးတယျ။
ဒါကွောငျ့ လူ ၂ ယောကျကို ကွားကနဝေငျပွီးမိတျဆကျတော့မယျဆိုရငျ double opt-in ကိုသုံးတတျအောငျ ကငျြ့ထားလိုကျပါစို့နျော။
qz.com မှ Anand Sanwal ၏ "You’re probably doing email introductions wrong" ဆောငျးပါးအား ဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈသညျ။
Permalink Reply by Phyo Ei Hlaing on August 17, 2015 at 14:57
so applicable and pretty wonderful post for me because I have never know about the double opt-in. Thanks for your post and expect for another ones!!!
Permalink Reply by Richard Michael William on August 18, 2015 at 2:54
Permalink Reply by ko myo lwin on August 20, 2015 at 14:58
Permalink Reply by Nan Khin on August 20, 2015 at 16:27